अन्तर्वार्ता Archives - HealthyKhabar
०८ फागुन २०७६
बालबालिकालाई हुने मिर्गौला रोग
सामान्यतया हामीहरु मिर्गौला रोग भन्ने वित्तिकै युवायुवती तथा वृद्धा अवस्थामा मात्र लाग्ने रोग हो भनेर बुझ्दछौ । उमेर बढ्दै गर्दा अस्वस्थकर खानपानले गर्दा उच्चरक्तचाप हुदै मिर्गौला रोगको शिकार हुुनुपर्ने हुन्छ । यति भनिरहदा साना बालबालिकहरुलाई मिर्गौला रोग लाग्दैन भन्नेचाँही हुन्न । बालबालिकालाई पनि मिर्गौलाका धेरै रोगले सताएको हुन्छ । कलिलै उमेरमा मिर्गौला फेल भएर कति बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । सामान्य समस्यालाई समयमा नै उपचार नगर्दा मिर्गौलाका जटिल समस्या भोग्ने बालबालिका धेरै छन् । अविभावकहरुले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने बालबालिकाहरुमा पटक–पटक पिसाबको संक्रमण देखिन्छ भने त्यो मिर्गौलाको समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्छ । पिसाबको सक्रमण हुनासाथ हामीले बुझ्नुपर्दछ कि मिर्गौलामा पनि केही न केही समस्या उत्पन्न भएको हुनसक्छ । भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपणमा पछिल्लो समय १० जना बालबालिकाहरु मिर्गौला फेल भएर उपचार गराइरहेका छन् । त्यसैले मिर्गौला रोगले बलबालिकाहरुलाई पनि सताउने रहेछ भन्ने विषय बुझ्नु पर्दछ । पिसाबको संक्रमण हुने कारण बालिकाहरुमा मुत्रद्वार र गुद्वारको सरसफाइ नहुँदा…
भारतबाट अवैधरूपमा ल्याइएको यौनबर्दक औषधिसहित चार जना पक्राउ
झापा,१७ चैतः प्रहरीले गएराती भारतबाट अवैधरूपमा नेपाल भित्र्याइएको १४ कार्टुन औषधिसहित चार जनालाई दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले कचनकवल गाउँपालिका–१ कुटीबाट यौनवद्र्धक औषधिसहित विभिन्न ब्राण्डका आयुर्वेदिक औषधि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । प्रहरीले बाह्रदशी गाउँपालिका–४ का २५ वर्षीय इन्तियाज आलम, सोही ठाउँका २८ वर्षीय ताहिर हुसेन, २७ वर्षीय सादम हुसेन र वौद्ध–१ काठमाडौँ निवासी ३१ वर्षीय झिनचोक शेर्पालाई औषधि बोक्न प्रयोग गरिएको भ्यान र दुई मोटरसाइकलसहित नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । मे १ ज ४०६३ नंको भ्यानमा औषधि राखेर बिर्तामोडतर्फ ल्याइँदै गरेको अवस्थामा अस्थायी प्रहरी चौकी कुटीले जाँचका क्रममा चारैलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये ताहिर भ्यान चालक हुन् । यो सँगै प्रहरीले मे ६ प १०१६ नंको मोटरसाइकल र अर्को एक थान भारतीय नम्बरप्लेट भएको वीआर ३७ ए २४९० को मोटरसाइकलसमेत नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएकोछ । उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखिएको छ । उनीहरुबाट नियन्त्रणमा लिइएको…
कति वर्ष उमेर पुगेपछि बुढो भइन्छ? तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्नेमा त्यसको जवाफ छ
पपुवा न्यू गिनीमा बसोबास गर्ने ४५ वर्षीय व्यक्तिहरू फ्रान्स वा सिङ्गापुरका ७६ वर्षीय व्यक्ति सरह बुढो भएको महसुस गर्छन्। र, उनीहरूको तन्दुरुस्ती औसतमा एक ६५ वर्षीय व्यक्तिको सरह हो। वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले गरेको एउटा बृहत् अध्ययनको यो निष्कर्ष ल्यान्सेट भन्ने जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले १ सय ९५ देशका स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क विश्लेषण गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार औसतमा उमेर सम्बन्धी चिन्ताहरू ६५ वर्ष पुगेपछि अत्यधिक रुपमा देखिन थाल्छ। कान नसुन्ने, हृदयघात हुने, बिरामी भइरहने र मस्तिष्कसम्बन्धी रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने आधारमा विभिन्न उमेरमा देखिने उनीहरूले पत्ता लगाएका छन्। र, उमेर बढ्दै जाँदा विस्तारै बुढो हुने र छिट्टै बुढो हुनेबीचको फरक तीन दशक वा त्यो भन्दा बढी हुनसक्छ। उक्त अध्ययनले धेरै उमेर भन्दा पनि तन्दुरुस्तीको दृष्टिकोणबाट पनि बुढो हुने विषयलाई हेरेको छ। बुढो भएसँगै उमेर सम्बन्धी रोगहरू बढ्दै जाने विषयलाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गरिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनकी प्रमुख लेखिका डा. एन्जेला वाइ चाङ भन्छिन्, "त्यो उमेरसँग जोडिएका स्वास्थ्य…
१४ वर्षकी बालिका थाहै नपाइ गर्भवती , बलात्कारको आरोपित फरार
राजविराज ,चैैत १४ गते । १४ वर्षीया बालिका ‘थाहै नपाई’ गर्भवती भएकी छन्। पेटको तल्लो भागमा पीडा भएको बताएपछि आमाले उनलाई डाक्टरकहाँ पुर्‍याएकी थिइन्। भिडियो एक्सरे गर्दा गर्भ बसेको देखिएपछि उनको परिवार चिन्तामा परेको छ। मजदुरीमा जाने गरेकी आमाले छोरी बलात्कृत भइरहेको ढिलो मात्र थाहा पाएकी थिइन्। बालिकालाई थप स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सप्तरी राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल ल्याइएको थियो। गर्भ बसेको ३४ साता पुगेको चिकित्सकले बताएका छन्। ‘बालिकाले आफूसँग के भयो र परिणाम के हुन्छ भन्ने थाहा पाइनन्’, अस्पतालमा सञ्चालित ओसीएमसीकी फोकल पर्सन मनीषा सिंखडाले भनिन्, ‘गर्भवती भएको कुरा धेरै पछि मात्र थाहा भयो।’ हनुमाननगर कंकालिनी–४ स्थित ठूलीआमाको घरमा बसेका बेला सोही गाउँमा पाहुना गएका छिन्नमस्ता गाउँपालिका–६ कुपहीका २१ वर्षीय प्रदीपकुमार मण्डलले यौनसम्पर्क राखेको पीडितको भनाइ छ। उनका अनुसार पछि घरमा ठूला व्यक्ति नभएको मौका पारी ती युवा आउन थाले। उनले भाइबहिनीलाई चकलेट खान पैसा दिई बाहिर पठाएर बालिकासँग यौनसम्पर्क गर्दै आएका थिए। मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका दृष्टिले कम उमेरमा…
थाहै नपाइ हुन्छ मस्तिष्कघात
पछिल्लो सयम सामाजिक सञ्जालतिर मस्तिष्कघातले अल्पायुमै निधन भन्ने खबरहरु प्रशस्त मात्रामा पोष्ट गरेको पाइन्छ । मानिस हिड्दाहिड्दै , चिया पिउँदा पिउदै, घरमा बसिरहेको अवस्थामा , काम गर्दा गर्दै मस्तिष्कघात भएर मानिसको ज्यान गएको छ । त्यसैले मस्तिष्कघात भनेको के हो ? यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ । मस्तिष्कघातका रिष्क फ्याक्टरहरुहरु के हुन भनेर जनचेतनाको विकास गर्नु जरुरी छ । हाम्रो शरीर सञ्चालन गर्ने मस्तिष्कले हो । शरीरको इन्जिन भनेकै मस्तिष्क हो । मस्तिष्कमा कुनै कारणले अवरोध भयो भने मस्तिष्कघात हुन्छ । जस्तै रगतको नशा बन्द भयो, रगतको सञ्चालन हुन सकेन भने त्यो पाटको ब्रेनले काम गर्न छाड्छ । ब्रेनमा रगत जम्यो भने पनि मस्तिष्कलाई ड्यामेज गर्दछ र काम गर्न छाड्छ । यस्तो अवस्थालार्ई मस्तिष्कघात (स्ट्रोन) भनिन्छ । मस्तिष्कघात दुइ किसिमको हुन्छ । १.रगत जमेर हुने (हेमोरेजिक)मस्तिष्कघातः (सानो रगतको नशा फुट्छ र रगत वरीपरी फैलन्छ । जहाँ रगतको नशा छ त्यसको ब्रेनले काम गर्न छाड्दछ । २. रगतको सञ्चालन नभएर हुने…